Diyaarinta dhirta | January 2020
Ugu Weyn Ee Diyaarinta dhirta
Sida loo codsado "Topaz": sharaxaadda iyo sifooyinka daroogada
Cudurka fungal waa halis u ah dhirta oo idil, oo ka bilaabma dalagyada khudradda ilaa dhirta gudaha. Xaaladaha noocaas ah, kaaliyaha ugu wax ku oolka ah ee beerta iyo ubaxlaha wuxuu noqon doonaa fangasaska Topaz, tilmaamaha isticmaalka kuwaas oo aad ka heli doonto maqaalka hoose. "Topaz": sharaxaadda daroogada Daroogada "Topaz" ayaa ka mid ah fungicides - walxaha awood u leh in ay burburiyaan oo aan u oggolaan in ay sii kordhiyaan xayawaanka iyo mycelium of fungus pathogenic.
Cagaarshowga Biyoolojiyanka "Gamar", sida loo isticmaalo kiniiniga iyo isticmaalka kiniinnada (buug)
Qaybinta cayayaan dilaha, bakteeriyada ayaa loo qoondeeyay daroogo gooni ah, laakiin inkastoo ay tani ku jiraan maaddooyinka fungicidal ee isku dhafan waxqabadka bakteeriyada iyo antifungal. Bactericides waxaa loo isticmaalaa in lagu dilo jeermiska bakteeriyada iyo fungal ee carrada iyo dhirta.
"Kornevin": sharaxaadda iyo tilmaamaha isticmaalka daroogada
Waqtiga horumarinta tiknoolajiyada, agrotechnology ee ubaxyada sii kordhaya, khudradda iyo miraha miraha weli ma istaagi karo. Si loo dardar geliyo tijaabada dhirta dhirta ee dhakhso badan, waxaan inta badan u adeegsan karnaa habka loo jarayo, si kastaba ha ahaatee, sida la og yahay, ma aha in goynta ay qaadato xidid. Kadibna waxaan la kulannaa hawsha sida loo kobcin lahaa kobcinta xididka si loo helo 100% boqolkiiba badbaadada geedo.
Sida loo isticmaalo daroogada "Home" cudurada yaanyada, qajaarka iyo baradhada
Daawooyinka gaarka ah - fungicides - waxay ku fiican yihiin in lala dagaallamo cudurada fangas. Mid ka mid ah kuwa ugu waxtarka leh iyaga ayaa ah daroogada "Hom". Waxaa loo isticmaalaa beerta, beerta, sariiraha ubaxa. Laakiin sidaa daraadeed maandooriyuhu waxyeello u geysan dhirta, waa muhiim in la ogaado sida loo ciribtiro "Hom" loogu talagalay buufinta iyo sida loo isticmaalo si sax ah.
Kicinta dhirta dhirta "Etamon": tilmaamaha isticmaalka
Sannadihii ugu danbeeyay, kiciyeyaasha iyo kor u qaadayaasha koritaanka dhirta ayaa noqday kuwo caan ka ah dadka degaanka xagaaga, beerta, iyo si fudud oo ay u jecel yihiin ubaxyada guriga. Marka xigta, waxaan si faahfaahsan uga fiirsaneynaa mid ka mid ah, "Etamon". Aynu fahamno waxa daroogada ay tahay iyo in la isticmaalo. Ma taqaanaa? Xakamaynta koritaanka dhirta dabiiciga ah waxaa lagu magacaabaa phytohormones waxaana lagu soo saaraa dhirta tiro yar.
Xakamaynta koritaanka dhirta: tilmaamaha isticmaalka kiciyaha ee ubax "Bud"
Kiciyaasha kobcinta, ee loo isticmaalo sida waafaqsan tilmaamaha, waxay bixiyaan natiijooyin wanaagsan oo kaliya. Beerta ujeedka hiwaayadku waxay bilaabeen inay isticmaalaan kiciyeyaasha aan ahayn waqti hore, laakiin aad u firfircoon. Waxyaabaha ay ka kooban tahay daawooyinkan, sida ay u saameeyaan dhirta iyo sida waxtar leh? Tixgeli tusaalaha kobcinta kobcinta "Bud".
Heteroauxin: sharaxa, walaxda firfircoon, tilmaamaha isticmaalka
Nadiifiye kasta, iyada oo aan loo eegin waxa uu ku korayo - geedo midho leh, xoortay ama ubax, had iyo jeer waxay doonayaan inay arkaan natiijada shaqadiisa sii kordhaysa ee warshad caafimaad leh. Dad badan ayaa horay u ogaanaya sirta: maxaad u baahan tahay inaad dalbato si ay dhirta si fiican u koraan oo u noqdaan kuwo firfircoon kobaca - tani waa kobcinta xididka, iyo sidoo kale bacriminta dabacsan ee organic, heteroauxin.
Sida loo isticmaalo daroogada "Fundazol"
Fungicides waa diyaar u ah ilaalinta iyo ka hortagga dhirta oo ka dhan ah fungal iyo cudurada bakteeriyada. Dhaqdhaqaaqa dhaqamada kala duwan, fangaska ayaa gabi ahaanba burburin kara goobta oo dhan beerto, faafinaysa warshad si ay u beerto. Maanta, suuqa ayaa leh xulaf badan oo daawooyin kala duwan, waana ay adag tahay in la raaco.
Diyaarinta nafleyda Immunocytofit waa bacriminta dabiiciga ah ee dhirta. Waxay si weyn u kordhisaa iska-caabintooda cudurrada kala duwan, waxay xoojisaa geeddi-socodka kobcinta, waxay kordhisaa wax-soo-saarka miraha waxayna yareyneysaa saameynta sheyga fytopathogenic. Macluumaadka guud "Immunocytofit" waa sheyga difaaca ee soo helay codsigiisa ku saabsan geedaha miraha iyo qurxinta, sida qajaarka, yaanyada iyo baradhada, iyo dhammaan noocyada miraha.
Daroogada "Ecosil": tilmaamaha loo isticmaalo falanqaynta
Wixii dhirta ay hoos u dhigto cudur ama cimilada iyo farsamooyinka beeraha aan habooneyn, Ecosil waa quwad dhiiri gelin leh oo siinaya awood iyo tabaruc. Sida loo badbaadiyo "Ecosil" dhirta beerta, beerta iyo beerta ubaxa, waa maxay bannaanka iyo bannaanka u sheegaan dib u eegisyada, iyo sababta ay tahay daroogada taas oo laga wada hadlay.
Ubax, miro iyo dhir baradho uma baahna daryeel keliya, laakiin sidoo kale ilaalinta noocyada kala duwan ee cudurrada iyo shilinta. Kaaliyaha beeraha ee wax ku oolka ah ee ganacsigan wuxuu noqon doonaa "Tiovit Jet" - la xiriir fungicide oo leh saameyn ballaaran. Next, waxaan ka fekereynaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sifooyinka qalabkani. "Tiovit Jet": walaxda firfircoon iyo qaabka loo sii daayo "Tiovit Jet" ayaa nafteeda u abuuray difaaca tayada leh ee dhirta laga soo saaro cudurrada iyo cayayaanka.
Dufanka isku dhafan "Acrobat TOP": tilmaamaha isticmaalka
Nasiib darro, bannaanka iyo beeraleydu waxay la kulmaan dhammaan noocyada cudurrada dhirta oo yareeya waxsoosaarkooda, ama xitaa keena dhimashada dalagyada. Soo-saarayaasha fangaska ayaa sannad walba soo bandhigaya horumarkooda cusub, oo loogu talagalay in lagu guuleysto cudurka waqti gaaban. Mid ka mid ah daawooyinkan ayaa ah laba-qaybood oo fangasoof ah "Acrobat TOP", oo ay diyaarisay BASF.
Guryaha fungicidal iyo tilmaamaha isticmaalka daroogada "Albic"
"Albit" ee beerta guriga, beerta iyo beeraha waa daroogo aan lagama maarmaan ah. Beeralayda waxay ku talinayaan dib-u-nooleynta dhirta ka dib marka walbahaarka dhirta ay keento, abaartii daba dheeraatay, oo ka timaaddo burburinta waxyeellada, si loo hagaajiyo biqilka abuurka, wax-soo-saarka wanaagsan iyo in laga hortago jirooyinka fungal ee kala duwan.
Fungicide "Horus": tilmaamaha isticmaalka
Si loo hubiyo in goosashadii wanaagsan ee beertii ama beerta, xannaanada saxda ah waa in laga qaadaa dhirta oo laga yaabo inay u nugul yihiin cuduro kala duwan iyo cayayaanka. Si loola dagaallamo cudurada waxay soo saareen qalab badan iyo daroogo. Suuqa in aad ka heli kartaa daroogada cusub "Horus", taas oo horay u guulaysatay si ixtiraam ah ee bannaanka iyo bannaanka u.
Ma suurtogal in la isticmaalo fangaska "DNOC" ee bannaanka iyo bannaanka u?
Dadka haysta dhulalka dalka ayaa leh dhibaatooyin badan. Cayayaanka iyo cudurrada noocyada kala duwan ayaa si gaar ah u xanaaqaya iyaga - waxaa la ogaaday in sanadka laga soo bilaabo sannadka inay noqdaan kuwo ka madaxbannaan tallaabada xalalka daaweynta dhaqameed. Sidaas awgeed waa in aad ku darsataa qaababka xooggan (hubaal). Tixgeli mid ka mid ah qalabkaan, waxbadan oo ku saabsan daroogada loo yaqaan "DNOC" iyo ku saabsan waxa ay isticmaalkeeda hoos u dhacdo.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Diyaarinta dhirta 2020